Waa maxay Wiki Wiki? - Semtadu waxay ogtahay jawaabta
Oliver King, oo ah Cilmi khabiir, ayaa sheegay in Wiki uu u adeegsado faylka 'Digital Encyclopedia' kaas oo ku faani kara mawduucyo kala duwan. Waa mid ka mid ah websaydhka ugu ballaadhan ee loo isticmaalo sababtoo ah guuldarrada bixinta macluumaadka lagama maarmaanka ah. Ka dib markii la abuuro "Termoonia terminals", boggani wuxuu leeyahay wax ka badan 5 milyan oo maqaalo oo maaddooyinka kala duwan ku jira - goodyear efficientgrip performance vs eagle f1. Xisbiyo kala duwani waxay leeyihiin nuqul muujinaya aqoontooda ku saabsan caqiidooyinka kala duwan ee caalamka. Aqoonyahanadu waxay kaloo isticmaalaan Wikipedia si ay u soo gudbiyaan xogta cilmi-baarista ee muhiimka ah.
Intaa waxaa dheer, wax walba oo ku jira Wikipedia ayaa ku siinaya tixraacyo iyo tixraacyo lagama maarmaan ah. Waxaa jira sawirro toos ah iyo sidoo kale isku xirnaanta iyo barashada wax waliba oo la adeegsanayo. Dadku waxay la tashan karaan Wiki si ay u helaan hagayaal mawduucyo kala duwan. Isticmaal kasta ayaa loo oggol yahay inuu wax akhriyo, beddelo, faalloono, iyo la wadaagno fikradiisa fikradiisa. Si aad u gooyso sheeko dheer, gaaban, waa mid bilaash ah oo loogu talagalay qof kasta oo adduunka ah. Sidoo kale, dadka isticmaala waxay abuuri karaan akoonnada ay isticmaalaan.
Ka mid ah 35ka ugu sarreeya bogagga internetka ee ugu caansan, Wikipedia waa kan keliya ee ururada aan faa'iido doonka ahayn oo u baahan meel bannaan oo martigelisa. Waxaa lagu martiqaaday meel martigelinaysa in ka badan 30 terabytes. Cilmi-baarayaashu waxay qiyaasaan in articles articles ay ku qoran yihiin bogagga Wikipedia isticmaala ugu yaraan 18 milyan oo tixraac ah. Tixraacyadaasi waxay leeyihiin in ka badan 2,5 bilyan oo aragtida bogga maalin kasta. Sidaa darteed, Wikipedia waxaa ku jira saldhig aqooneed oo ballaaran, oo ka sarreeya dhammaan saldhigyada aqoonta caalamiga ah. Isticmaalayaasha ayaa la macaamili kara Wiki si ay u qabtaan hawlo badan.
Wikipedia waxaa la bilaabay 15-kii Janaayo 2001. Aragtida ugu horeysa ee boggeeda dhaqanku wuxuu soo muuqday bishii Nofembar isla sannadkaas. Sanadkii 2009, waxa ay heysteen 3 malyan oo macaamiil ah waxaana ay heleen 4 milyan oo qof sanadkii 2012-kii. Mid ka mid ah howlgalladii ugu muhiimsanaa waxaa ka mid ah in dunida oo dhan la siiyo helitaanka aqoonta aadanaha oo dhan!
Inkasta oo guulo la taaban karo, Wikipedia ayaa wali ah waddo ujeeddooyinkeeda ah. Tan iyo markii ay shaacisay 5 Malyan oo maqaal ah, waxaa la sheegay in ay u baahan yihiin in ka badan 100 malyan oo maqaallo ah si ay u daboolaan qaybo badan oo ka mid ah hadafyadooda. Uruurinta wadarta aqoonta aadanaha ee shabakada fudud ma aha hawl fudud oo lagu fulinayo. Markaad wada-hadashaan Liberia, waxaa loo baahan yahay in ay noqdaan maqaalo ka badan oo ku saabsan gobollada kala duwan ee adduunka. Iskudhaca boggaga dhinaca galbeedku wuxuu noqon karaa dhibaato weyn